Thwebula Movavi Video Editor 15.4.1 – Vessoft
WindowsI-MultimediaAbahleli bemidiyaMovavi Video Editor
Isigaba: Abahleli bemidiya
Ikhasi elisemthethweni: Movavi Video Editor
Movavi Video Editor – isofthiwe omuhle ukusebenza nge video amafayela. Isofthiwe amathuluzi anhlobonhlobo ezahlukene, ehlunga kanye nemiphumela ukuqedela processing ividiyo. Movavi yevidiyo kwenza ukwengeza amafayela umsindo kuvidiyo, ishumeke izihlokwana, ukusika noma lezo ividiyo ngaphandle kokulahlekelwa izinga. Isofthiwe uyakwazi ukwenza video kanye bamba audio kusukela kumadivayisi exhunywe kwi computer noma eminye imithombo. Movavi Isiqophi Editor ikuvumela ukuba okuthekelisa imiphumela yomsebenzi njengoba video for amadivaysi mobile, isitolo e kudingekile audio noma ifomethi futhi lishicilele on the ezahlukene services video.
Lesi sihlungi nemithelela video processing
Ukungeza of isihlokwana kanye izingoma
Ukulungisa of izilungiselelo video
Saving lwamafayela in ezidingekayo media takhiwo
Thwebula Movavi Video Editor
I-Movavi Screen Capture Studio – isofthiwe yokuthwebula ividiyo kusuka esikrinini sakho bese yenza izithombe-skrini. Isoftware ikuvumela ukuba wenze ngezifiso izilungiselelo eziningi zokubanjwa kwesikrini ngezidingo zomsebenzisi.
Amazwana ku Movavi Video Editor
Movavi Video Editor software ehlobene
I-Audacity – Isihleli somsindo esineqoqo elikhulu lemisebenzi senzelwe ukuhlela amafayela alalelwayo ezingeni elifanele, siqophe umsindo kusuka emithonjeni ehlukile futhi sisuse amaphutha erekhodi.
i-FunBox – ithuluzi lokubuka okuqukethwe amadivayisi kusuka ku-Apple. Isoftware ikuvumela ukuthi ufinyelele ohlelweni lwefayela ledivayisi nokuphatha izinhlelo zokusebenza.
I-HitmanPro – ithuluzi eliphumelelayo ukuthola nokususa izinto ezinobungozi ngokusebenzisa ukuhlaziywa kokuziphatha nobuchwepheshe befu.